Ogaden News Agency (ONA) – Ururka Haweenka Ogadeniya Ee (UHO) Faraca Gaarisa oo Maanta Kulan Isugu Yimid +Video
Ururka Haweenka Ogadeniya Ee (UHO) Faraca Gaarisa oo Maanta Kulan Isugu Yimid +Video
Waxaa maanta isugu yimid koolan koodi caadiga ahaa ururka haweenka Ogadeniya ee UHO faraca magaalada Gaarisa waxaana kasoo qayb galay dhamaan ba ururka haweenka Ogadeniya ee magaalada Gaarisa kulan ayaa waxaa sidoo ka qayb galay qaar kamida maamulka jaaliyada Ogadeniya ee Gaarisa.
Shirkan ayaa waxaa ugu horayn ba fur furay gudoomiyaha ururka haweenka Ogadeniya UHO faraca Gaarisa Halganto Raxma Ahmed waxayna aad uga hadashay xaalada halganku maanta maraayo iyo doorka haweenka Ogadeniya ay ku lee yihiin waxayna dhamaan kasoo qayb galayaashii kula dar daaran tay in lasii dar dar galiyo halganka Ogadeniya lana garab is taago jabhada wadaniga Xoraynta Ogadeniya.
Waxaa kale oo ka hadlay shirka qaar kamida hooyooyinka Ogadeniya waxaana kamid ahaa hooyo Halganto Nimco Abdi iyo Hooyo Maryan kuwaasi oo dhamaantood ka dhawaajiyay in la dar dar galiyo halganka Ogadeniya.
Hooyooyinka Ogadeniya ayaa ah lafdhabarta halganka waana kuwa dhabta ah ee maanta halkaas soo gaadh siiyay halganka Ogadeniya waxaana ilaahay uga bar yaynaaa inu ku simo xoriyada Ogadeniya.
shirkan ayaa wuxuu gabagabadii kusoo dhamaaday si guul ah waxaana lagu balamay in la xoojiyo halganka Ogadeniya.